Maxaa loola jeedaa celceliska deynta? Qeexidda ereyga maaliyadeed
Start daymaha -Leaks credit dhimis
1 Deyn muddo gaaban ah oo loogu talagalay la-hawlgalayaasha la isku halayn karo
2 Tusaale ahaan deynta saafiga ah
3 Deynta saafiga ah sida deynta la sugay
4 Xaalad sharciyeed oo loogu talagalay amaahda jaban
5 Darajada sicir-dhimista ee macnaheedu waa
6 Xidhiidhada la xiriira:
Deyn muddo gaaban ah oo loogu talagalay la-hawlgalayaasha la isku halayn karo
Der credit dhimis waxaa sidoo kale loo yaqaanaa amaahda amaahda. Tan waxaa guud ahaan loogu yeeraa deyman gaaban oo ku dhex yaal qaybta bangiga. Biilasha aan weli bixin biilasha waxaa laga iibsadaa hay'adaha amaahda. Qofka macaamilka wuxuu helayaa biilka beddelka. Caddadkani waxay u adeegtaa macaamiisha tixgelin. Sicir-dhimista waxaa laga jarayaa bangiga. Sicir-dhimisku waa dulsaar ah inuu kobciyo qaan-gaadhka. Dabadeed, daynta ayaa loo wareejiyaa bangiga. Taariikhda ugu dambeysa ee isbeddelka, qaraabada waa in ay dib u bixiyaan lacagta loo qoondeeyey bangiga. Laga bilaabo bangiyada oo idil, deynta saafiga waxaa si gaar ah loo siiyaa lammaanayaal la aamini karo. Waxay noqon kartaa mid si fiican loo fahamsan yahay in khasaarihii dambe aan dhici doonin. Baanka sidaas ayuu u ilaaliyaa dhammaan shuruudaha iyo khatarta laga yaabo in si buuxda looga saaro.
Tusaale ahaan deynta saafiga ah
Shirkad kasta (X) waxay sahay u siisaa alaab qiimo leh 10.000 Euro shirkad kale (Y). Shirkadda Y waxay waydiisaneysaa mid dhigista lacag bixinta wadarta maalmaha 90. Shirkadda X waxay ogolaatay hindisahan. Isbedelka shirkadda Y ayaa la soo saaraa. Iyadoo isbedelkan X iibiya sheegashada la xiriirta bangi. Lambarka lacag bixinta waxaa hoos udhaca hay'adda amaahda oo ah boqolkiiba shan. Sidaa darteed isbeddelka ma keenayo iibka 10.000 Euro. Halkii dhibta lacag ah 9.875 shirkadda X. Company Y loo gudbin doonaa sida ay maalmood 90 of sarrifka ee uu baanku ku heshiiyeen. Tan laga soo bilaabo bangiga ugu dambeyntii wuxuu helayaa Euro 10.000.
Deynta saafiga ah sida deynta la sugay
Qaadashada dalab (biilka isdhaafsiga) waa deyn sugan. Marka laga hadlayo dalab aan la aqbali karin, iibiyaha waxaa laga yaabaa in laga jaro codsiga sheegashada. Macaamiisha (amaahda) ayaa badanaa la siiyaa xarun deyn ah oo lagu dhimayo machadka. Xaddidaadkan waxaa laga yaabaa inay ku yimaadaan heerka bangiga ee isbeddelka. Ujeedada dib u soo noqoshada, Bundesbank ayaa gaari kara hadafkeeda. Bangigu wuxuu ka helaa lacagta alaabada loo qoondeeyey macaamiishiisa foomka isdhaafsiga. Marka la eego dulsaar bixinta, kuwan waxaa lagu iibsadaa waqtiga soo hartay. Haya'daha deynta ayaa ugu horreyn xiiseynaya qalabka wax lagu beddeli karo ee uqalma kaydinta Fedaraalka Federaalka. Dib-u-noqoshada waxay keeni kartaa dib-u-maalgelin.
Xaalad sharciyeed oo loogu talagalay amaahda jaban
Sharciga isweydaarsiga wuxuu bixinayaa aasaaska sharciga ah ee deyn bixinta iyo shuruucda ku haboon. Xeerarkan waa in laga helaa §§ 433 ff. Bixinta bixinta lacagta deynta ah waxaa si cad loo qeexay. credit dhimis biilka iyo siyaasadda credit oo ka mid ah bangiyada xeerarka Federaalka waa 19 Baaragaraafka hoos §. Si aad u hesho Act Bundesbank 1 ma 1.. Kuwa ka soo horjeeda deynta saafiga ah waa Akzeptkredit.
Darajada sicir-dhimista ee macnaheedu waa
Ganacsiga dhimista ee Deutsche Bundesbank ayaa joojiyay awoodda siyaasadeed ee lacagta ah ee loogu talagalay ECB. Isbedelkan qiimaha dhimista ma uusan jirin illaa Janaayo 1999. Markii hore waxaa jiray suurtagalnimada in bangiyada fursad u helay in rediscount isbedelka iibsan at Bundesbank ee heerka sicir-dhimis ah. Dabcan, kiiskan, sidoo kale, qiimeynta credit ee wanaagsan ayaa ah shuruudaha. dukaanka-dhimista guud ahaan ayaa laga badiyay qaar ka mid ah ay muhiimadda Tani waxay sidoo kale waa sababta oo ah, sida ku shaqeeya by xawaalad bangiga dhexe ee Yurub rediscounting ma aha. Laakiin weli iibsan bangiyada shaqsiga mararka qaar isku beddeli iyo ku meelayn ku Diskontkredite.Dies walaac la mid ah ka dibna, laakiin inta badan xawaalad shisheeye.
Maqaalka horelacag dammaanad
Maqaalka xigtahanti-ool ah